Manjakandriana : seha-pihariana iray lehibe ny tantely | NewsMada
Seha-pihariana iray lehibe any ambanivohitra ny fiompiana tantely, manerana ny faritra maro eto Madagasikara, afovoan-tany sy any morontsiraka. Ankoatra ny fanofanana tanora hiditra amin’izany sehatra izany, miady mafy amin’ny aretina varroise manimba io fiompiana io ny federasiona mpiompy tantely, faritra Analamanga, miaraka amin’ny « Réseau Soa ».
Manjakandriana, kaominina iray eto amin’ny faritra Analamanga, ahitana mpiompy tantely be indrindra… miady mafy amin’io aretina varroise io. Olana mahazo azy ireo ny fahalafosan’ny fanafody hoentina mitsabo izany. Marihina fa azo tsaboina tsara ny varroise, tsy virus na otrikaretina akory izy io fa bibikely manimba azy. « Tsy misy ny fikarohana atao eto an-toerana hoentin-miady amin’ny aretina. Voatery hafarana ny fanafody nefa tsy ampy ny hoenti-manana any amin’ireo tantsaha », hoy Rakotomanga Samoelina, filoha lefitry ny federasiona mpiompy tantely, faritra Analamanga.
Lafo ny fanafody
Araka ny fantatra, vidiana 240.000 Ar ny iray fonosana amin’izany fanafody izany. Fanafody iray fonosana ho an’ny tranon-tantely miisa 25. Mpiompy iray tena mivelona amin’io fihariana io anefa, manana tranon-tantely tsy latsaky ny 100. Noho ny fihanaky ny aretina, tratra avokoa ireo faritra maro malaza mpiompy tantely manerana ny Nosy. Ny any Mananjary, ohatra, potika avokoa hatramin’ny 95 % tamin’ny taona 2015. Ny eto Analamanga izao no manomboka miarina.
Talohan’ny taona 90, efa anisan’ny naondrana tany Eoropa ny vokatra tantely avy eto Madagasikara. Ny taona 1996, tratran’ny ankivy ara-toekarena (embargo) izany, ary afaka tamin’ny taona 2012. Teo anelanelan’izay, nisy nahondrana ihany tany Nosy Maorisy, ary ny avy ao indray nandefa ny vokatra any amin’ny tsena eoropeanina, saingy mitondra ny anarana maorisianina. Fatiantoka ho an’ny toekarena malagasy daholo izany, indrindra fa ho an’ny tantsaha mpiompy malagasy.